Homelọ Ulo Illinois na-eto Cannabis - Otu esi emebi iwu cannabis na Illinois
Nto Uto Ulo ulo na Illinois
Ulo Illinois maka ndi bi na ulo ogwu
Kedu osisi ole ị nwere ike itolite na Illinois?
Iri cannabis ụlọ obibi dị na Illinois dị maka ndị ọrịa cannabis n'ụlọ obibi mbụ ha - yana mmachi ise (5) osisi mkpụrụ osisi karịrị sentimita ise (5) n’ogologo - ezinaụlọ ọ bụghị otu mmadụ.
Gee ntị ma ọ bụ lelee nyocha nke Nkeji edemede 10 maka Ojiji nke Cannabis (ubara ụlọ). Pịa njikọ maka iwu iwu zuru ezu dị peeji 610 nke ndị omebe iwu nke Illinois gafere
Ederede nke ụgwọ ahụ banyere ụlọ na-eto maka ndị bi na ọgwụ wii wii nke Illinois maka ebe obibi ha bụ isi n'okpuru, yana ntinye vidiyo & ederede na iwu ahụ n'onwe ya.
EBIGBO EGO: BUzụta AHED EDFỌ KWES LERLINE NWA
Cannabis Grolọ Nwere Ike Dị mfe
N’ezie, site na ịhịan wii wii n’ụlọ na-eto eto maka ebumnuche ọgwụ na steeti Illinois, ndị na-akọ ahịhịa ọnụ karịa mgbe ọ bụla na-atụgharị na thentanetị maka ndụmọdụ.
Mara otu esi akụ cannabis na Illinois gụnyere ịmara banyere ihe a chọrọ pụrụ iche nke steeti a - yana ịchọta ụzọ iji arụ ọrụ na ihe ị nwere.
Mejupụta Ngwa ma nweta Kaadị Cannabis
O bu ihe nwute, obughi onye obula nwere ike itolite ahihia nke ha na Illinois. Needkwesịrị ị na-eme atụmatụ maka iji eriri afọ maka ọgwụ, yana ịkwesịrị itinye akwụkwọ maka ikike cannabis ọgwụ - ma ọ bụ kaadị. Iji nweta akwụkwọ ikike, ịkwesịrị itinye akwụkwọ - nke a were were ihe ruru ọnwa iri ruo otu afọ iji hazie ya na 2015. Agbanyeghị, ka ọ na-erule 2020, ịnwere ike ịnweta kaadị ọgwụ cannabis na Illinois naanị otu ụbọchị ma ọ bụ ihe na-erughị.
Ọ bụghị ndị niile na-azụ ihe ga-enweta akwụkwọ ikike ga-enweta akwụkwọ ikike ha. Agbanyeghị, ọ bụ ihe mbụ (ma ọ dị mkpa!) Ị ga - emerịrị.
Abamuru nke Ito Uto
Ọnọdụ ihu igwe dị na Illinois bụ nke na-eto cannabis n'èzí anaghị akwadoro nke ọma. Ya mere, ị ga-enwe ihe ịga nke ọma cannabis na-eto n'ime ụlọ.
Enwere ọtụtụ uru n’ime otu a. Ọ bụghị naanị na ị ga - enwe ike ijikwa oke ọkụ, ikuku, ọkụ, na iru mmiri gị, mana ị ga - enyekwa osisi gị gburugburu ebe obibi na-eto eto. Nke a nwere ike ịkwalite nrụpụta ọrụ gị ogologo oge.
Lebara ihe ndị chọrọ gburugburu gị anya
Ọ bụrụ n’ịkụla mkpụrụ n’oge gara aga, ikekwe ị ma etu osisi ụfọdụ ga-esi sie ike! Cannabis adịghị iche. Kwesiri idozi ọkụ nke ọ bụla maka itolite ma nye opekata mpe 40 na 60%. Temperatures ga-achọ oge okpomọkụ 70 ruo 85 (mgbe ọkụ na-agba) na ogo 58 ruo 70 (mgbe ọkụ na-agbanyụ).
Ikwesiri idobe ezigbo ikuku iji nwee ebe ikuku, ọdụ ụgbọ elu, na nzacha, ị ga - achọkwa iji zubiga ókè.
Y’oburu n’inwere ike inweta ikikere iji toba ahihia na Illinois, eleghi anya ị ga-echupu ego iji bido. Ekwela ka onwe gị pụọ.
Gbaa mbọ hụ na ịnwe akụrụngwa kwesịrị ekwesị na ịmata tupu ịmalite. E nwere ụdị ihe ịchọrọ itinye ego na ya, ma nwee ezigbo ego ị ga - enwe ike, ọ ga - eme nke ọma na - eme n'ọdịnihu.
Na ọkwa dị oke mkpa, ị ga - achọ:
Ime ụlọ ma ọ bụ igbe tolitere
Nweta Mkpụrụ Dị Mma
Na mgbakwunye na akụrụngwa ekwuru n’elu, ị ga-achọ itinye ego na mkpụrụ ndị dị mma. Ọ bụrụ na ị na-eto wii wii maka ebumnuche ọgwụ, ị ga-ahọrọ ụdị nke nwere nnukwu cannabinoids. Ma ọ bụghị ya, ụdị cannabis kachasị mma ga-agbanwe, mana nhọrọ gụnyere sativa, indica, na ngwakọ.
Nwee usoro ihe omimi
Ozugbo ị nwere ngwa gị niile, ọ ga - adị mkpa ka ị mata onwe gị ụzọ niile ị na-esi eto igbo. N'ezie, ị ga - ebido site na ịkọ mkpụrụ gị na ichere ka ha toa, mana ị ga - enwe ndidi ka osisi gị na - agafe na mkpụrụ, na - akụ ahịhịa, ma emesia - owuwe ihe ubi na ịka mma.
Nwee ndidi, n’agbanyeghi gi, na oru ike gi agha agha agha. Mụta ka esi eto cannabis na Illinois abụghị naanị na-akwụghachi ụgwọ ma na-eme mmadụ ọgaranya kamakwa ọ nwere ike ịbara gị uru nke ukwuu.
Homekpụrụ Ọnọdụ Ulo na Illinois bụ Nkeji edemede 10 nke CRTA maka Ojiji Nkeonwe
Gụọ iwu IL n'okpuru ebe a: Nkeji edemede 10 nke CRTA
(b) canzụkọ cannabis maka iji aka ya mee ihe dabere na njedebe ndị a:
(1) Onye bi na Illinois dị afọ 21 ma ọ bụ karịa bụ onye
bu onye ori tozuru oke idenye aha ya n'okpuru iwu Ahụike Ahụike Ahụike Cannabis nwere ike tobe ahịhịa osisi, nwere oke osisi ise kariri sentimita ise n’ogologo, n’otu ụlọ na-enweghị ebe iku ume ma ọ bụ akwụkwọ ikike nka . Na Ngalaba a, “onye obibi” pụtara mmadụ a biri na steeti Illinois ruo ụbọchị iri atọ tupu ịkụ ọrụ.
(2) Ugbo a gha gha eme ihe n’ime
gbachiri, gbachiri oghere.
(3) Ndị ọrịa tozuru etozu debara aha ha nwere ike ịzụta
Mkpụrụ osisi cannabis sitere na ngalaba a na-akwụ ụgwọ maka ebumnuche ụlọ. Enwere ike inyeghi mmadụ ma ọ bụ resị ya mkpụrụ ọ bụla.
(4) Agaghị echekwa ma ọ bụ tinye osisi cannabis
ebe ha nọ n’okpuru echiche ọha na eze, dị ka akọwara na Iwu a. Onye ọrịa tozuru oke nke na-akọ cannabis n'okpuru Ngalaba a ga-akpachapụ anya iji hụ na osisi echekwabara site na ịnwetaghị ikike, gụnyere ịnweta onye na-erughi afọ 21 na-enwetaghị ikike.
(5) nabkụ mkpụrụ Cannabis nwere ike ime naanị
ihe obibi dị ka iwu si dị ma ọ bụrụ na ịnwere nkwenye nke onye ahụ ịnwe ya n'ụzọ iwu kwadoro. Onye nwe ma ọ bụ obere ala nke ụlọ nwere ike igbochi ịkụ ndị na-eto cannabis site na onye lessee.
(7) Ebe obibi, ụlọ obibi, ụlọ obibi
otu, mkpọchi, oghere mkpọchi, ma ọ bụ mpempe ụlọ anaghị ekewa n'ime ọtụtụ ebe obibi agaghị enwe ihe karịrị osisi ise n'otu oge.
(8) A pụrụ ịdebanye aha nke osisi Cannabis naanị site aha
ndị ọrịa tozuru etozu bi na ụlọ ahụ, ma ọ bụ onye nnọchi anya ha nke na-abịa n'ụlọ obibi ruo nwa oge, dịka mgbe onye ọrịa ahụ tozuru oke na-anọghị nwa oge nwa oge.
(9) Onye ọrịa tozuru oke nke tolite
karia ọnụ ọgụgụ cannabis osisi kwere, ma ọ bụ onye na-ere ma ọ bụ na -ewepu osisi cannabis, mkpụrụ osisi cannabis, ma ọ bụ ngwaahịa cannabis ewepụtara n'okpuru Nkebi a, ga-akwụ ụgwọ ntaramahụhụ dịka iwu siri nyere, gụnyere Iwu Njikwa Cannabis, na mgbakwunye na ọnwụ nke Nkụzi ụlọ dị ka iwu siri ike.
(Isi mmalite: PA 101-27, eff. 6-25-19; 101-593, eff. 12-4-19.)
Video ifuru wii wii nke Illinois
(nke a bụ ntụgharị vidiyo na pọdkastị dị n’elu.)
Ehee, ụtụtụ ọma gị niile. Echere m na ọ ga-abụ ihe dị mma ma ọ bụrụ na ịbịaru nso na igwe okwu. Mana bia ebe a ma gafere ihe mere n’abali gara aga na Springfield, Illinois. See na-ahụ, Illinois nwere ịjuụ wii wii n'ezie. Ugbu a, mgbe m kwuru na wii wii nke Illinois nyere m iwu, ana m eche na m tozuru nke ahụ. Omeiwu nke ụlọ omeiwu nke Illinois wepụtara vootu ma nyefee iwu ị mariụ wii wii. Iwu Illinois nke igbo wii wii bu HB1438. Peoplefọdụ ndị na-ajụ,
"Gịnị kpatara HB1438 ọ bụghị SB007?"
Yabụ aga m ekerịta enyo m n'ezie, ọsọsọ. Then ga-enwe ike ịhụ ndị a, ụgwọ ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị bụrụ onye ọka iwu google cannabis, nke ahụ bụ otu ị ga - esi chọta m. Aha m bụ Tom Howard. A bụ m… Nke a bụ weebụsaịtị m Onye ọka iwu Cannabis. Ugbu a naanị adreesị Chicago nọ ebe ahụ. Enwere m nsogbu na… Google azụmahịa m. Mana ị maara etu nke ahụ siri dị.
Yabụ, nke a bụ akwụkwọ iwu a. Ọ bụrụ na m merie ịchịkwa ọzọ, ị ga - ahụ na m na - achọ onye bi. Ihe kpatara m ji achọ onye bi… Ekwere m na ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-ejikwa F na ngalaba a ebe a… Ma ngalaba a, echegbula, m ga-atụfu nke ahụ na nkọwa nke vidiyo a ozugbo m mechara. Ga-enwe ike ịhụ ihe ndị otu ụlọ omebe iwu nke Illinois gafere ụnyaahụ. Peoplefọdụ ndị na-asị, "homelọ adịghị etolite?" N'ezie, nke ahụ bụ ihe m na-egosi gị.
Yabụ na ọ bụrụ na ịga ma chọọ SB… Mba ọ bụghị SB. Nke a bụ HB1438 nke ndị omebe iwu Illinois gabigara, ụnyaahụ, nke 9 nke okwu 38th ga-eme ka ị gaa na okenye nke ndị okenye na-eji Illinois etolite. Ma ụlọ ka na-eto. Agbanyeghị, ha akụzila oke ihe ọ bụla. Ndionye mbu na-a au iko kọfị. Chei chukwu. Illinois na karịsịa Peoria, Illinois dị mma maka kọfị ohuru ọhụrụ. Amaghị m ma m nwere ike ịga ebe ọ bụla.
Yabụ na ime ụlọ ka ga-anọ ebe ahụ. Agbanyeghị na ha achọpụtala na ọ ga-abụ onye ọ bụla, ọ bụ naanị onye bi na Illinois, dị afọ iri abụọ na otu ma ọ bụ karịa, bụ onye tozuru etozu n'okpuru mmemme ịnya ụgbọ ala nke Ahụike Ahụike Cannabis. Ndị ahụ nwere ike ịkọ ahịhịa na-enweghị mmachi karịa ise dị ogologo n'ogo ụlọ. Na-enweghị ebe a na-azụlite ma ọ bụ akwụkwọ ikike nka. Ma na ngalaba a, onye bi na ya, pụtara na onye biri n'obodo steeti Illinois ruo ụbọchị iri atọ tupu ịkụ ọrụ.
Homelọ Illinois na-eto cannabis
Yabụ ka ndị mmadụ na-agwa gị na enweghị ụlọ ọ bụla na-eto na iwu Illinois nke iji ihe okenye. Eleghị anya ụgwọ, enweghị ụlọ na-eto maka ndị na-abụghị ndị ọrịa wii wii ọgwụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrịa wii wii na Illinois, ị ka nwere amụba ụlọ. Kedu ihe ọ pụtara mgbe m kwuru… Ọ dị mma na ọ bụ ntakịrị nduhie. Ekwuru m na wii wii nke Illinois nyere iwu iwu maka teknụzụ bụ eziokwu. Nke a bụ oge izizi nke mbụ Illinois nyere aha akwụkwọ iwu maka inye marijuana ọkwa steeti. Ọ bụ naanị steeti ndị a, ewezuga Nebraska, bụ ndị bicameral. Yabụ na ndị otu Senate agabigala. Mana nke ahụ dị egwu n'ihi na ụgwọ maka Senate na SB007. Mana nke ahụ abụghị ụgwọ ha gafere. Kama ha gafere HB1438. Na HB1438 n'ezie bụ ụgwọ ụlọ. Ma ya mere ụgwọ ụlọ ahụ bụ ihe ewepụtara anyị… Ma Cassidy n'ụlọ wee gbanwee ka o tozuo maka ụlọ tolite ịbụ naanị ndị ọrịa ọgwụ wii wii. Ihe ozo m ga aruru elu wee banye na ihuenyo ugbu a ngwa ngwa. M na-aga abụghị naanị ị kọọrọ gị… Ya mere, gaa ọzọ, ọ dị mma ebe ahụ, peeji nke 40 nke Illinois Med…
Oge 2020 pụtara ugboro 32 na Iwu Iwu Okenye na Ọkpụkpụ Illinois
Ọ dị mma na ọ bụghị wii wii ọgwụ, ọ bụ okenye na-eji wii wii ugbu a. Ebe ahụ ka ị ga - ahụ ụlọ gị toro ma ọ bụrụ n’ịgwọ ọrịa. Mana ka anyị kwuo maka afọ 2020. Nke ahụ kwesịrị…… 2020. Gịnị kpatara nhịahụ m anaghị aza? Ọ dị mma, nke ahụ na-aza. Njikwa ịchọta… Ọ dị mma ugbu a ọ na-arụ ọrụ. Obere oru okwu mgbe niile. Yabụ ka anyị chọọ okwu n’afọ 2020. Okwu a bụkwa 2020 ga-apụta ugboro 32 na iwu a. Kedu ihe kpatara anyị ji achọ okwu ahụ bụ 2020? Maka na ọ bụrụ na nke a gafee, anyị ga-abanye oge dị mma na akụkọ ihe mere eme nke Illinois ebe ọtụtụ ngwa dị maka ụdị ikikere ndị okenye nwere iji wii wii ga-abịa n'ịntanetị n'afọ 2020. opekata mpe na nke ahụ ga-abụ n'ihi . Letterbọchị izizi izizi nke uhie ga-abụ Mee nke 2020. Mana n'ezie ka anyị bido site na ụbọchị izizi izizi, Jenụwarị 1st nke 2020. Jenụwarị 1 nke 2020 ga-abụ ụbọchị ị nwere ike ịga zụrụ azụ igbo nke okenye. O nwekwara ike ịbụ ụbọchị bụ ụbọchị dị mma nke nke a.
Yesterdaynyaahụ ụnyaahụ ka anyị nọ na-eme ihe nkiri ka m na-ekwu maka akụkọ akụkọ cannabis. Denye aha ugbu a iji sonyere anyị. Wednesdaybọchị Wenezde ọ bụla na elekere abụọ nke mgbede, anyị na-agafe akwụkwọ akụkọ cannabis maka izu. Mgbe ahụ ha na-enwekarị ụfọdụ akụkọ nnuku iwu ukwu cannabis ozugbo anyị kwụsịrị mgbasa ozi ahụ. Vis-a-vis ndị ụlọ omeiwu ndị Illinois na-agafe wii wii. Ndo. Enweghị m onye ọ bụla ịtụbara nke ahụ nwere ike jupụta oge. Yabụ na Jenụwarị 2 nke 1 ị ga-enwe marijuana iwu kwadoro yana ọ ga-abụrịrị iwu ịzụta. Mana ọ gaghị abụ ihe iwu kwadoro ịzụta n’aka mmadụ niile. Kama nke ahụ, ọ ga-abụrịrị iwu ịzụta site na nkwenye mbụ nke okenye na-eji ngalaba nkesa. Yabụ lee m. Yabụ na ndị a ga-abụrịrị ụlọ ọrụ wii wii na-aga ịkọ ọgwụ. Ha ga-abụrịrị ndị nwere ike ịmalite ire ndị na-azụ cannabis n'ụbọchị mbụ nke 2020.
N'ezie, oge ahụ 2020 pụtara ugboro 32. Anaghị m achọ… Ọ bụ ebe ahụ. Lee anyị aga, lee anyị aga. Nke ahụ bụ ihe m na-achọ. Oge a nke ọnwa Mee n’aho 1, inye ndi mmadu ikike ikari iji ikike ulo oru mee ihe tupu Jenụwarị 2020, 1. Ngalaba ahụ, ngalaba ya pụtara na ngalaba ọrụ ugbo, ga-ewepụta akwụkwọ ikike akwụkwọ ikike 2021 nke ndị okenye tupu Mee 75, 1. Mgbe ahụ ha ga-eme ka okenye jiri ngwa, ee, ngwa ahụ agaghị adị rue Ọktọba 2020, 1. Eleghị anya ụmụ okorobịa, ikekwe ịmara nke a gbasara m. M na-anọchite anya ọtụtụ ụlọ ọrụ hemp. Emeghịkwa ngwa maka hemp n'ihu ọha ruo Eprel 2019 nke afọ a. Nke ahụ dị mma, otu ọnwa gara aga ruo taa. N’oge ahụ ekwentị m gbawara na m na-enyere ọtụtụ ndị aka.
Mana ugbu a anyị ga-enwerịrị ihe yiri nke ahụ. Ebe otutu ndi mmadu n’acho choro otu n’ime akwukwo ikike iri-asaa ahu. Ha ga-achọ itinye akwụkwọ maka otu n'ime akwụkwọ ikike ndị ahụ tupu Mee 75st nke 1. Mana nke a agaghị adị mfe dịka ikikere hemp nke nwere ezigbo ọrụ enyi na ọfụma ịbanye. Jeff Cox na ngalaba nke ahịhịa ọgwụ dị na Ngalaba Ọrụ Ugbo nke Illinois rụrụ ọrụ dị ukwuu na ngwa ahụ. Ma ị nwere windo toro ogologo. Kedu ihe kpatara ọ ga-eji bụrụ na ngwa agaghị adị ruo Ọktọba 2020st ma ọ bụ na ha agaghị anabata ya mgbe ọnwa Jenụwarị 1 gachara. Ma ịgaghị ewepụta ngwa ndị ahụ ruo mgbe ọnwa Mee dị na Mee. N’ihi ya, chee echiche banyere nke ahụ. Ọktọba 20, Jan 1, Mee 1… Oku ekwentị sitere na South Carolina. Nwere ike ghara ịbụ onye ahịa mbụ na-akpọ m taa.
Yabụ ịnwere Jenụwarị 1 nke 2021 bụ mgbe ngwa gị ruru. Don't gaghị enweta akwụkwọ ahụ ruo mgbe Ọktọba 1 nke 2019. Ọ gaghị adị 75. A ga-aga karịa 75. Ha na-achọ inweta ụkwụ ha n'ọnụ ụzọ ahụ. Mana mgbe ahụ ha agaghị ekwupụta onye meriri ha n'ime ọnwa ise. Ndị a bụ ụdị ngwa a ga-enwe akara. Ngwa a ga-aba ụba n'ihi na ịkwesịrị itinye otu a iji lelee igbe ndị a ga-apụta na ngwa ndị a. Yụ ịghọta, ọ bụrụ na ị na-achọ iru 200 ma enwere ike inwe 212 isi na nke a. Anyị agaghị eme vidiyo ugbu a n'ihi na enwere m nzukọ dị ihe dị ka iri anọ na ise na m ga-aga.
Yabụ na anyị nwere ike ikwu ntakịrị ihe gbasara oge na ụlọ tolite ka dị ebe ahụ maka ndị ọrịa marijuana ọgwụ. Ka anyị laghachite azụ n’ime ihuenyo ị ga-ahụ ụbọchị mkpụrụ akwụkwọ uhie ọzọ na-atọ ụtọ. Otu a ka ọ dị, na inyocha ngalaba mgbasa nke [nkwekọrịta 00:08:58] ndị okenye ji ikike rubere nzukọ. Onu ogugu ndi nwere ikike a ka agenye onyinye ha na mpaghara BLS obula dika blah, blah, blah. Yabụ na m bikwa ebe a na Peoria, anyị ga-aga atọ. Nke ahụ mara mma freakin dị jụụ. Mpaghara St. Louis ga-enweta anọ, Chicago n'ezie na-enweta 47. Ma nke a dị oke mma. M pụtara na enwere ọtụtụ ihe na Illinois… M pụtara na Rock Rock bụ naanị inweta otu maka iti mkpu. Ma Peoria na-enweta atọ. Ee, ụzọ ime nke ahụ [Jehan 00:09:24]. Nke oma.
Yabụ na ndị ọzọ, enwere ahịhịa January 21. Ka anyị hụ, ngalaba asatọ… Oh Amaghị m ihe onye ahụ bụ. Usoro mmemme ikike ịnya ọzụzụ nke ụlọ akwụkwọ kọleji obodo. Oh nke ahụ dị mma. Nke ahụ bụ ihe m na-amaghị.… Amaghịdị m na nke ahụ dị. Nkeji edemede 25, Cannabis College, Cannabis Vocational pilot program. Nke a bụ eziokwu bụ Illinois, gaa kọleji obodo na nke ukwu na cannabis. Na na na, m nwere ike tinye ma debanye aha. Ihe banyere nke a bụ ụgwọ ego abụọ dị iche. Thegwọ nke bụ SB007 nke ndị omebe iwu na-agaghị agafe, Kama nke ahụ, ndị Senate gafere HB1438 dị ka ewepụtara ya n'ụlọ. Gwọ ahụ bụ ogologo peeji 610. Yabụ… A na-enwe usoro ịkwọ ụgbọelu mmụta mmụta kọleji nke obodo iji nọrọ ebe ahụ na ọ nweghị onye na-ekwu maka ya. Nke ahụ anaghị atụ m n'anya nke ukwuu. Mana ọ dị ka ị na-abata na Illinois, bụ isi na cannabis. Ọ mara mma nke ukwuu.
Ọ dị m nwute. Ekwesịrị m ịdebanye aka na afọ 2020 a niile. Enwere mmadụ iri anọ na atọ n’ime ha. Ma ugbu a, m ga-emezu ihe ahụ ma anyị ga - ekwu okwu ngwa ngwa banyere ihe nwere ike ịbụ akụkụ kachasị mma nke ndị okenye ụlọ ọgbakọ iji mezuo iwu ụnyaahụ site n'aka ndị omebe iwu. Na olile anya anyị ga-ekwu maka ihe ga - akacha mma. Amaghịkwa m ma ọ ga-eme. Anyị ga - ekwu maka ya ngwa ngwa. Mana ogo 32 na-eto ikikere site na July 40 nke 1. Ma ha enweghị ike ire ruo mgbe ọnwa nke iri abụọ na abụọ ruo ụbọchị 2020 dị na Disemba 21 nke 2021, ha bụ [inaudible 21:2021:00] ruo 11 ọzọ na-eto ikikere. Yabụ na a ga-enwe 19 ma ọ dịkarịa ala, 60 maka ugbu a, ikikere ọrụ na-eto. Ma na enwere ikike na ikikere ndị na-eto eto. M na-aga… Mgbe ahụ, onye a bụ otu n'ime ha. Na na oge ọ bụla oge nka azụmahịa karịa 100 na mmachi ndị ọzọ. Mgbe nke a bụ ngwa ihe anyị ga-aga.
Ndị na-azụ ihe na-atọ ụtọ na-adọrọ mmasị n'echiche ahụ na nke ahụ ga-abụ ụzọ ndị mmadụ nwere ike isi laghachi na oghere cannabis. Onweghikwa ikike onye na ihe nwere ike ịnwe ha niile. A ga-enwe ọtụtụ osisi mkpọ ebe ahụ maka ịkpọsara, maka ọrụ na-eto. Ma emesia ndị ahụ batara na egwuregwu, Illinois na-akwụsị… N'ihi na dịka mma, ị na-eto, ị na-eme, ị ga-agbasa. Ọ bụ eziokwu? Onye na-anya ite? Nke ahụ ga-abụ akwụkwọ ikike ọhụụ nke na-abịa, njem. Yabụ mgbe nke a gachara, otu n'ime ụbọchị ndị a, otu n'ime ụbọchị mkpụrụ akwụkwọ uhie ndị a dị ebe ahụ, ị ​​ga - enweta akwụkwọ ikike dị iche. Ma ebe a na-ewepụta ya na ebe a na-akọ ugbo na onye na - eme ya agaghị enwe ike ibufe mkpụrụ ahụ. Ha ga-enyefe ya n'aka onye ọkwọ ụgbọ mmiri nke enyere ya ikike ibufe cannabis. A ga m ewere nke a kechie nfụkasị na-egbu m.
Dịka ị nwere ike ịmaghị, Illinois na-ata ahụhụ, ọfụma mba dum na-ata ahụhụ site na ihe nwere ike ịbụ otu nke ide mmiri kachasị njọ kemgbe Oke Iju Mmiri ahụ dịka 1927. Ma ọ bụ ihe ọ bụla ha kwuru na akụkọ ahụ. Ọka adịbeghị n'ubi. Ubi ndị ahụ bụ ala. I nwere ike ịkọ osikapa. Nke ahụ bụ ... Anyị nwere ụdị osikapa paddy dị na Illinois na Illinois. M na-eche na nke ahụ bụ n'ezie azụ azụ hemp akuku a ntakịrị. Onye chọrọ ịma? Ternyaahụ, ndị ụlọ omebe iwu nke Illinois tozuru oke ịmeju wii wii. Enwere olile anya ihe na - eme ugbu a, n'ihi na ndị omebe iwu nke ndị omebe iwu nke Illinois gbara na Fraịde, echi, Mee 31st. Taa ụlọ ga-agafe ụgwọ nke ya, HB1438. Echi JB Pritzker ga-abanye ya na iwu. Mana enwere ike ọ dị ngwa ngwa. Ikekwe ha chọrọ oge, ka ịmara, jiri ụdị isi okwu ndị a. Nke ahụ ga - abụkwa ihe ịtụnanya na otu ọnwa site na ya na - apụta na ngwụcha izu mbụ nke ọnwa Mee wee nwee nnọkọ akụkọ a. Ebe o wepụtara peeji itolu ahụ nke m mepụtara peeji na. Nke a ga - abụkwa peeji. Mana nke a ga - abụ peeji dị mpịakọta ka ọ na-elekwasịkarị anya na nzụlite ụlọ maka igbo wii wii na Illinois. Ma mgbe ozo okwu ogbugbu ndi ozo.
A peeji 610 niile a, ọ bụrụhaala na ọ gafere, ga - eme ka ọdịnaya m ịmepụta ọrụ dị mfe. Ma dịkwatụ ụjọ. Maka na dịka m na-eme ọdịnaya a mgbe ị kwụ n’ozi ịntanetị ma ndị mmadụ kpọọ gị. Mgbe ahụ ndị mmadụ chọrọ ka ị nyere ha aka jikọta ngwa ndị a. Ma n'eziokwu ị dabasịrị n'ụgbọ ahụ maka nke ahụ. Na mgbe ahụ ọ bụ ọtụtụ… Ọ na - aga… Enwere m ike isi awọ n'afọ. Anyị ga ahụ. Enwere m olileanya na m nwere ike ịrahụ ụra. Ya mere echi, na-atụ anya na ha gafere ụgwọ nke aka ha ma JB Pritzker nwee nnukwu ọgbakọ mgbasa ozi. Onye ọ bụla na-ekwu ihe dị ịtụnanya ihe a ga-emere steeti Illinois. Ọ ga-emekwa. Ma mgbe ahụ anyị na-aga n'ihu n'ime. Agbanyeghị, amaghị m ma nke ahụ ga-eme taa. Ọ gaghị eju m anya. Nke ahụ bụ ihe ịtụnanya n'ezie ma ọ bụrụ na Illinois aghọọ gọọmentị ndị omebe iwu izizi inye marijuana iwu. Iji mee nke ahụ, ha chọrọ ha abụọ, ọ bụghị Onye isi ala, gọvanọ na ụlọ abụọ nke ndị omebe iwu steeti. Ma mgbe ahụ, ha ka chọrọ… Ma m nwere ike dị…
Iji kwusi nke a, aga m ekekọrịta njedebe nke ụgwọ okenye iji Illinois. Ọ na-ejedebe na akụkọ dị iche iche 999. Ekwere m na ọ bụ [Herman Cane 00:15:21] dere ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị peeji 610. Enweghị osooso ma ọ bụ na-egbu oge. Oh gosh. Ee. Maka na eleghi anya ha tinye… O di nma. Ugbu a onye coder m na India choro ihe. Ọ dị mma, nke ahụ bụ ụdị otu o siri bụrụ m. Na-enweta oge ụfọdụ, mgbe ahụ ndị mmadụ chọrọ ihe. Ọ dị mma, erutere m n'ọfịs. Enwere m onye na-abata.
3 EGO NA-EKWUOZI CANABIS
4 Nkebi nke 10-5. Ojiji nke cannabis; mgbochi
5 nkuzi; ntaramahụhụ.
6 (a) Bido na Jenụwarị 1, 2020, agbanyeghị ndị ọzọ
7 Inye iwu, ewezuga otu enyere n'iwu a,
8 ihe ndị a abaghị uru nke Iwu a ma
9 abụla onye omekome ma ọ bụ ịda iwu obodo n'okpuru iwu Steeti ma ọ bụ
10 emume ọ bụla nke ọchịchị obodo nke Steeti a ma ọ bụ
11 ihe ndabere maka ijide ma ọ bụ ịnapụ akụ dị n'okpuru iwu steeti maka
12 ndị ọzọ na-abụghị ndị obi mmadụ dị n'okpuru afọ 21:
13 (1) inwe, oriri, iji, ịzụta, inweta,
14 ma ọ bụ na-eburu ego nke cannabis maka iji ya mee nke ahụ
15 adịghị gafere ikike inweta n'okpuru Nkebi nke 10-10 ma ọ bụ
16 ma ọ bụghị dịka ihe Iwu a chọrọ siri dị;
17 (2) ịkọ mkpụrụ osisi maka iji ya mee ihe na
18 dika iwu nke Iwu a si di; na
19 (3) ịchịkwa ihe onwunwe ma ọ bụrụ na ọ bụ omume
20 nyere ikike site na nke Iwu a na-eme na ihe onwunwe dabere
21 ya na Iwu a.
22 (a-1) Bido na Jenụwarị 1, 2020, agbanyeghị na ndị ọzọ
23 Inye iwu, ewezuga otu enyere n'iwu a,
24 inwe, iwere, iji, ịzụta, inweta, ma ọ bụ
1 na-ebuga ego nke cannabis zụrụ ma ọ bụ mepụta
2 dabere na Iwu a nke anaghị agafe inweta
3 ikike dị n'okpuru mpaghara (a) Nkebi nke 10-10 agaghị a
4 ihe ndabere maka ijwe ma ọ bụ tufuo akụ dị n'okpuru iwu steeti.
5 (b) Igha nkpuru cannabis maka iji ya mee ihe n’okpuru ndi a
6 ihe ndị na-agaghị emeli:
7 (1) Onye bi na Illinois dị afọ 21 ma ọ bụ karịa bụ onye
8 bụ onye ọrịa tozuru etozu n'okpuru Onye na-eme Ebere
9 Iji Iwu Mmemme Ahụike Cannabis Ahụike nwere ike ịzụlite
10 cannabis osisi, na a ịgba nke 5 osisi ndị ọzọ
11 karịrị sentimita ise n’ogologo, otu ụlọ na-enweghị ụzụ
12 ikike ma ọ bụ akwụkwọ ikike nka. Na Ngalaba a, “onye bi”
13 putara onye mmadu bi na steeti
14 Illinois ruo oge iri atọ tupu ịkụ ọrụ.
15 (2) Ugbo a gha gha eme ihe n’ime
16 gbachiri, gbachiri oghere.
17 (3) Ndị ọrịa tozuru etozu debara aha ha nwere ike ịzụta
18 mkpụrụ osisi cannabis sitere na ngalaba maka nzube nke ụlọ
19 ịkụ. Enwere ike inyeghi ma ọ bụ resị ya mkpụrụ ọ bụla ọzọ
21 (4) Agaghị echekwa ma ọ bụ tinye osisi cannabis na a
22 ebe ha nọ n’okpuru echiche ọha na eze, dịka
23 kọwara na Iwu a. Onye ọrịa tozuru oke
24 na-akụ cannabis n'okpuru Nkebi a ga-ewere
25 reasonable ga - echekwa na osisi anaghị echekwa
26 ikike na-akwadoghị, gụnyere nnweta na-enweghị ikike site na a
1 onye gbara afọ 21.
2 (5) nabkụ mkpụrụ Cannabis nwere ike ime naanị na ebe obibi
3 ihe omuma ya dika inwere onye oru ubi ma obu were ya
4 nkwenye nke mmadụ na aka ya n'ụzọ iwu kwadoro
5 aku. Onye nwe ya ma ọ bụ obere ala nke ụlọ obibi nwere ike
6 gbochi uto cannabis site na onye lessee.
8 (7) Ebe obibi, ụlọ obibi, ụlọ obibi
9 otu, mkpọchi, oghere mkpọchi, ma ọ bụ mpempe ihe onwunwe abụghị
10 kewara n'ime ọtụtụ ebe obibi agaghị enwe ihe ọzọ
11 karịa osisi 5 n'otu oge.
12 (8) A pụrụ ịdebanye aha nke osisi Cannabis naanị site aha
13 ndị ọrịa ruru eru bi n ’ụlọ, ma ọ bụ ha
14 Onye nyere ikike ịnabata ụlọ obibi na nkenke
15 oge, dịka mgbe onye ọrịa ruru eru bụ nwa oge
16 pụọ n'ụlọ.
17 (9) Onye ọrịa tozuru oke nke tolite
18 karịa ọnụọgụ mkpụrụ osisi cannabis, ma ọ bụ onye
19 na-ere ma ọ bụ na-enye ahịhịa osisi, mkpụrụ osisi cannabis, ma ọ bụ
20 cannabis na-ebute ngwaahịa emepụtara n'okpuru Nkebi a
21 maka ịta ntaramahụhụ dị ka iwu siri nyere, gụnyere
22 Iwu Nchịkwa nke Cannabis, na mgbakwunye na ụlọ funahụrụ ya
23 ikike ịkụzi ọrụ dịka usoro iwu siri dị.
24 Nkebi nke 10-10. Inwe ikike.
25 (a) Ewezuga ma ọ bụrụ na Iwu a nyere ikike, maka a
1 onye gbara afọ 21 ma ọ bụ karịa ma onye biri na nke a
2 Steeti, oke inweta dị ka ndị a:
3 (1) gram 30 nke ifuru ahịhịa;
4 (2) karịa 500 milligrams nke THC dị
5 mkpụrụ osisi cannabis na-enye ya;
6 (3) gram ise nke mkpụrụ osisi cannabis lekwasị; na
7 (4) maka ndị ọrịa tozuru oke, cannabis ọ bụla
8 nke nkpuru osisi cannabis toro n’okpuru okpuru (b) nke
9 Nkebi nke 10-5, nyere mkpụrụ ego ọ bụla cannabis mepụtara
10 ngafe nke 30 grams nke cannabis raw ma ọ bụ ya ga-emerịrị
11 nọrọ na nchekwa ma ọ bụ ebe obibi
12 aku nke o toro.
13 (b) Maka onye gbara afọ iri abụọ na otu ma ọ bụ karịa
14 ọbụghị onye bi na steeti a, okere ya bụ:
15 (1) gram 15 nke ifuru ahịhịa;
16 (2) gram ise nke mkpụrụ osisi cannabis lekwasị; na
17 (3) milligrams 250 nke THC dị na a
18 mkpụrụ osisi cannabis.
19 (c) Ahịrị nke a hụrụ na nkeji ole (a) na (b)
20 A ga-atụle nkebi nke a.
21 (d) Onweghi onye n’amaghi ama, choo inweta, ma obu
22 nweta uru nke cannabis sitere na ọgbakọ na-ekesa akwụkwọ ma ọ bụ
23 ịghasa ihe ga-eme ka ọ karịa ihe
24 ikike nwere n'okpuru Usoro a, gụnyere cannabis bụ
25 onye mmadu toro n’okpuru Iwu a ma obu nweta ya n’okpuru
26 Obere ọmiko nke Iwu Mmemme Ahụike Cannabis.
1 Nkebi nke 10-15. Ndị mmadụ na-erubeghị afọ 21.
2 (a) Onweghi ihe di na iwu a nke akwadoro inyefe mbufe
3 nke afọ, na onye na-erubeghị afọ 21, nwere ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ
4 afọ, ma ọ bụ ikwe ka onye na-erubeghị afọ 21 gboo
5 ịzụta, nwere, jiri, usoro, njem, ibu, ma ọ bụ iri
6 cannabis ewezuga ebe ejiri ikike nke ọmịiko nyere
7 Iwu Mmemme Ahụike Ahụ Ike Cannabis ma ọ bụ nke Community College
8 Mmemme Pilot Vocational Vocational.
9 (b) N’agbanyeghi usoro iwu ozo
10 na-enye ikike inweta ọgwụ cannabis, ọ nweghị ihe dị na nke a
11 Iwu nyere onye dị n’agbata afọ iri abụọ na otu ihe ịnwe
12 afọ. Onye na-erubeghị afọ iri abụọ na afọ iri na atọ nwere ike ịrịa na ya
13 ma ọ bụ na ihe ya nwere nke mebiri iwu obodo
14 edepụtara na paragraf (a) Nkebi nke 4 nke Njikwa Ahụhụ
16 (c) Ọ bụrụ na onye ahụ na-erubeghị afọ iri abụọ na otu nọ n'ụgbọala
17 Oko nke Ozo nwere ike
18 kwụsịtụ ma ọ bụ kagbuo ikike ịnya ụgbọ ala nke onye ọ bụla maka a
19 imebi nke a Nkebi n’okpuru Nkebi 6-206 nke Illinois
20 Koodu nke Ugbo ala na iwu apuru n’okpuru ya.
21 (d) Iwu megidere nne na nna ma ọ bụ onye nlekọta maka ịmachara
22 kwere ka ebe obibi ya, ihe ọ bụla ọzọ nwere nzuzo n'okpuru
23 njikwa ya, ma ọ bụ ụgbọ ala ọ bụla, conveyance, ma ọ bụ ụgbọ mmiri
24 N'okpuru ikike ya ka onye oru nke Jehova jiri ya mee ihe
25 Nwa nne ma ọ bụ nna onye nlekọta ma ọ bụrụ na onye nlekọta ahụ, ọ bụrụ na onye akpọrọ nọ n'okpuru
1 afọ 21, n'ụzọ dị a mebiri nke a
2 Ngalaba. A na-eche na nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta nwere ịma ama
3 nyere ohere obibi ya, ihe ọ bụla ọzọ nwere
4 n'okpuru njikwa ya, ma ọ bụ ụgbọ ala ọ bụla, conveyance, ma ọ bụ
5 ugbo mmiri n'okpuru aka ya ka eji eme ihe
6 Nkebi a ma ọ bụrụ na ọ kpachaara anya na-enye ikike ma ọ bụ kwe
7 oriri nke Ou site na ndị na-anaghị ahụ anya. Onye obula
8 mebie nkebi nke a (d) nke ikpe na-ezighi ezi klas A
9 ikpe mmadụ ga-agụnye, ma ọ gaghị adị
10 pere mpe na, ezigbo ego na-erughị $ 500. Ọ bụrụ na a mebiri nke
11 mpekere a (d) ozugbo ma ọ bụ n’amaghị ama na-arụpụta nke ukwuu
12 aru ojoo ma obu onwu nye onye obula, onye ahu na emebi iwu a
13 Nkebi mpaghara dara iwu klas nke 4. Na nkebi a
14 (d), ebe obibi ma ọ bụ ihe onwunwe ọzọ nwere onye nwe ya na
15 bi n'ụlọ ma ọ bụ lessee, trier nke eziokwu nwere ike ịchọpụta na
16 ma ọ bụ
18 Nkebi nke 10-20. Njirimara; njirimara ụgha;
20 (a) Iji kpuchido nzuzo nkeonwe, Ngalaba nke
21 Iwu usoro ego na ọkachamara agaghị achọ a
22 onye zụrụ iji nye ọgbakọ na-ekesa ya
23 ozi ndị ọzọ gbasara njirimara gọọmentị nyere
24 kpebie afọ onye zụrụ ya, yana ọgbakọ na-ekesa akwụkwọ
25 agaghị enweta ma dekọ akụkọ gbasara gị gbasara a
1 onye zụrụ ahịa na-enweghị nkwenye nke onye zụrụ ya. Ihe omume
2 nzukọ a ga - eji onye na - agụ elektrọnik ma ọ bụ kọmputa
3 ịgụgharị ngwaọrụ iji nyochaa nyocha nke gọọmentị nyere
4 njirimara, ọ bụrụ na ọdabara, iji chọpụta onye zụrụ ya
5 afọ na njirimara nke njirimara. Ihe nchoputa obula ma obu
6 ozi nke onye zụtara ma ọ bụ nata
7 dika usoro a si ejigide, ejigide ya,
8 ekesara ma ọ bụ gosipụta maka ebumnuche ọ bụla belụsọ dịka enyere ikike
9 Iwu a.
10 (b) Onye ga-erubeghị afọ iri abụọ na otu agaghị anọ ya
11 ma ọ bụ nye onyinye na azụmaahịa cannabis ma ọ bụ cannabis
12 Onye isi nzụlite azụmahịa ma ọ bụ onye ọrụ ọ bụla edepụtara ma ọ bụ
13 okwu ngosipụta nke afọ nke bụ ụgha, wayo, ma ọ bụ n'eziokwu
14 onye nke ya, maka ebumnuche nke:
15 (1) ịzụta, ịnwa ịzụta, ma ọ bụ ihe ọzọ
16 inweta ma ọ bụ ịnwa ịnweta cannabis ma ọ bụ cannabis ọ bụla
17 ngwaahịa; ma obu
18 (2) inweta uru na azụmaahịa
20 (c) Imebi Nkebi a bụ ihe ọjọ A Klas A
21 kwekọrọ na Nkebi nke 6-20 nke Iwu Njikwa Liquor nke 1934.
22 (d) Onye ode akwukwo nke steeti nwere ike ikwusi ma ọ bụ kagbuo nke a
23 ịnya ụgbọ ala nke onye ọ bụla maka ị mebiri nke a
24 Ngalaba n'okpuru Nkebi 6-206 nke Usoro Vegbọala Illinois na
25 iwu anapuru n'okpuru ya.
26 (e) O nweghi onye nnochite anya ma obu onye oru nke ikike
1 atọrọ ma ọ bụ gbahapụrụ maka ire ma ọ bụ tinye cannabis ma ọ bụ
2 cannabis ngwaahịa nye onye na-erubeghị afọ 21 ma ọ bụrụ na
3 mọbụ onye na-ahụ maka ọrụ achọrọ ma gosipụta ya, tupu edobe ya
4 cannabis ma ọ bụ mkpụrụ osisi cannabis nye mmadụ n’agbata afọ iri abụọ na abụọ
5 afọ, ezigbo ihe akaebe edere nke afọ yana njirimara nke
6 mmadu. Nkpirisi a (e) anaghị etinye ya ma ọ bụrụ nnochite anya ma ọ bụ
7 onye ọrụ nabatara akaebe e dere ede ebe ọ maara na ọ bụ ụgha
8 ma ọ bụ wayo. Ezigbo ihe akaebe edepụtara maka afọ na njirimara nke
9 onye ahu bu akwukwo edeputara site n’aka gọọmenti etiti, Steeti, onodu ma obu
10 gọọmentị ime obodo, ma ọ bụ mpaghara ala ma ọ bụ ụlọ ọrụ ya,
11 gụnyere, mana ọnweghị oke na, nke onye na-anya ụgbọ ala
12 ikike, asambodo ndenye aha nke enyere n’aka ndi agha
13 Iwu Nhọrọ Ọrụ, ma ọ bụ kaadị njirimara enyere enyere a
14 onye otu ndi agha. Gosiputa na onye nyere ya ikike ma obu onye
15 egosiri onye ọrụ ya ma ọ bụ onye nnọchi anya ya ma tukwasiri obi na ụdị ihe a
16 ederede akaebe na azụmahịa ọ bụla Iwu a machibidoro
17 bụ ihe agbachitere obi ya na mkpesa mpụ ọ bụla
18 ma ọ bụ usoro ọ bụla maka nkwusiozi ma ọ bụ wepu onye ọ bụla
19 ikike dabere na ya.
20 Nkebi nke 10-25. Omuma ndi mmadu na ihe ndi mmadu choro banyere ha
21 ojiji nke osisi nke ndị na-azụ ihe.
22 (a) Onye zụrụ azụ nke gbara afọ 21 ma ọ bụ karịa abụghị
23 dabere na njide, ịgba akwụkwọ, ịhapụ ikike ọ bụla ma ọ bụ
24 ikike, ma ọ bụ ntaramahụhụ ndị ọzọ gụnyere, mana ọnweghị oke,
25 ntaramahụhụ obodo ọ bụla ma ọ bụ ntaramahụhụ ọ bụla
1 osisi ikike ma ọ bụ ọkachamara na-ahụ maka ọrụ, dabere naanị
2 ojiji nke afọ ma ọ bụrụ na (1) onye zụrụ ya nwere ego nke
3 cannabis nke na-agaghị agabiga oke nwere n'okpuru
4 Nkebi nke 10-10 na, ọ bụrụ na onye zụrụ ya nwere ikike, asambodo ma ọ bụ
5 aha ka itinye aka na ahia ma obu oru n’oru obula
6 na (2) iji cannabis anaghị emebi mmụọ ahụ
7 ma ọ bụ na-etinye aka na ọrụ nke ọrụ ya
8 enye asambodo, ezinyere ma obu onye edenye aha ya.
9 (b) Onye zụrụ ya afọ iri abụọ ma ọ bụ karịa agaghị edo onwe ya n'okpuru ya
10 njide, gbaa akwụkwọ, ịhapụ ikike na ikike ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọ bụla
11 ntaramahụhụ, gụnyere, mana ọnweghị oke na, ntaramahụhụ obodo ọ bụla ma ọ bụ
12 ntaramahụhụ sitere n'aka ọrụ ma ọ bụ ọkachamara
13 osisi ikikere, dabere na (i) ire cannabis
14 ngwa agha ma ọ bụrụ na ewere ya n'ọrụ ma nye ya ikikere dị ka onye na-eweta enyemaka ya site na
15 nzukọ na-ekesa ma ọ bụ (ii) ịnọ ọnụnọ ma ọ bụ
16 Ọnọdụ osisi ndị na-eme ka anabụ ike dị ka enyere n'okpuru Iwu a.
17 (c) Inweta, ma ọ bụ itinye n'ọrụ maka ihe nnọchite anya
18 kaadị njirimara ma ọ bụ akwụkwọ ikike anaghị eme ka enwere ike ime eme
19 mee ka ma ọ bụ inyo mmadụ enyo enyo iji kwere na ọ dị mpụ
20 emebere, a gaghịkwa eji ya mere ebe ndabere iji kwado
21 nchoputa nke mmadu, ihe ma obu ulo nke onye ahu
22 inwe ma ọ bụ itinye akwụkwọ maka kaadị njirimara. Na
23 ikike, ma ọ bụ ngwa maka, kaadị njirimara
24 adịghị egbochi ịdị adị nke ihe puru omume ma ọ bụrụ na enwere ike omume
25 ihe kpatara ihe ndabere ndị ọzọ.
26 (d) Onweghi onye obula nke Steeti Illinois ga-aru oru
1 dabere na mpụ ma ọ bụ ntaramahụhụ obodo maka ịme ihe ọ bụla
2 ezigbo okwukwe na ịdabere na Iwu a mgbe ị na-eme ihe niile
3 nke aka oru ya. Nnọchi anya na ịnọ n'ụgwọ
4 a ga-enye ndị ọrụ Steeti ọrụ dị ka ewepụtara na Nkebi 2
5 nke Emplolọ Ọrụ Na - enyocha Ndị Ọrụ nke steeti.
6 (e) Enweghị iwu mmanye ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-agbazi mmezi, ma ọ bụ
7 Onye ọrụ mmanye ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndọtị were n'ọrụ.
8 ga-edo onwe ya n'okpuru mpụ ma ọ bụ iwu obodo, belụsọ maka
9 ịkpachara anya mee ihe na-adịghị mma, n'ihi omume ọ bụla
10 n ’otu ọrụ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ nke mmadụ chọrọ
11 machibidoro ma ọ bụ gbochie inwe ma ọ bụ iji cannabis site na a
12 onye nọ n'ụlọ mkpọrọ, n'ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụ
13 ụlọ mkpọchi ime obodo, na paịle ma ọ bụ iwu a na-elekọta
14 mwepu, ma obu uzo ozo n'okpuru ikike iwu akwadoro
15 gị n'ụlọnga ma ọ bụ onye.
16 (f) Maka ebumnuche nke inweta nlekọta ahụike, gụnyere akụkụ anụ ahụ
17 ibugharị mmadụ, iji mmadụ eme ihe n'okpuru Iwu a anaghị eme
18 mejuputara iji ihe ire ma obu uzo ozo
19 mee ka mmadụ ghara ike n ’ụlọ ọgwụ.
20 Nkebi nke 10-30. Amachibidoro ịkpa ókè.
21 (a) Ma ọnụnọ nke akụrụngwa cannabinoid ma ọ bụ
22 metabolites na mmiri nke ahụ mmadụ ma ọ bụ nwe
23 ngwa metụtara mkpụrụ osisi cannabis, ma ọ bụ omume metụtara ojiji a na-eji ya eme ihe
24 nke osisi cannabis ma ọ bụ itinye aka na ihe metụtara cannabis
25 ihe omume dị n'iwu dị n'okpuru Iwu a site na ikike ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ
1 nne na nna, nne nna, onye na-elekọta iwu, onye na-azụ nwa, ma ọ bụ ndị ọzọ
2 onye e boro maka ọdịmma nwatakịrị, ga-etolite
3 ndabere ma ọ bụ ntọala ndabere ma ọ bụ nkwado maka ihe ọ bụla ma ọ bụ
4 site na aka ndị ọrụ ọdịmma ụmụaka ma ọ bụ n’ezinụlọ ma ọ bụ nke ụmụaka
5 ụlọ ikpe, nchọpụta ọ bụla na-ezighị ezi, akaebe na-ezighị ezi, ma ọ bụ mmachi nke
6 ikike ọ bụla ma ọ bụ ihe ùgwù ọ bụla n'usoro aga - eme iji nwude a
7 Nwatakịrị, na-eme ka nwa a na-azụlite nwa, ma ọ bụ onye ọzọ
8 mma iji nweta nwatakịrị ma ọ bụ mee ka onye nne na nna na-azụ ya.
9 ma ọ bụ jee ozi dị ka ntọala nke nchọpụta ọ bụla siri ike, akaebe ọjọọ,
10 ma ọ bụ machibido ikike ọ bụla inwe ihe ùgwù na ịga n'ihu
11 metụtara nlekọta, nchedo, nlekọta ụlọ ọrụ, na
12 igbu nke uche, ma ọ bụ ijikwa ala, ọ gwụla ma
13 ihe mmadu mere na cannabis mebere ihe
14 ihe egwu na-enweghị isi na nchekwa nke nwatakịrị ma ọ bụ na uzọ ọzọ
15 gosi onye ahụ na ya erughi eru ka o doo anya site na
16 ihe akaebe doro anya. Ngalaba a metụtara naanị iduzi
17 echebe n'okpuru Iwu a.
18 (b) Onweghi onye nwe ulo ahu a ghaghi ata ahu mmadu ahuhu ma obu kwusi ya
19 n’okpuru ọchịchị Steeti maka ịgbazinye onye na-eji cannabis n’okpuru
20 Iwu a.
21 (c) Onweghi ihe di n’iwu a nke apuru ime ihe ichoro
22 mmadu ma obu nguzobe ya na ikike inweta ihe iwu kwadoro
23 mee ka onye ọbịa, onye ahịa, onye na-ele ọbịa, onye ahịa, ma ọ bụ onye bịara abịa jiri ya
24 cannabis na ma ọ bụ na ihe onwunwe.
25 Nkebi nke 10-35. Mmachi na ntaramahụhụ.
1 (a) Iwu a enyeghi ohere onye ọ bụla itinye aka na, na
2 anaghị egbochi ịmanye ndị nkịtị, ndị omekome ma ọ bụ
3 ntaramahụhụ ndị ọzọ maka itinye aka na, ụdị omume ọ bụla:
4 (1) ibido ọrụ ọbụla n'okpuru ike nke
5 afọ mgbe ime nke a ga-abụ ileghara ihe anya,
6 arụrụala ọkachamara, ma ọ bụ omume ọjọọ;
7 (2) inweta osisi:
8 (A) n'ime ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ, belụsọ ma enyere ya aka
9 tozuru onye ọrịa ma ọ bụ onye na-elekọta ya anya
10 Obere ọmumu nke Mmemme Pizza Cannabis
12 (B) na ntọala nke ụlọ akwụkwọ ọta akara ọ bụla ma ọ bụ isi ma ọ bụ
13 ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ gwụla ma akwadoro maka asambodo
14 ma ọ bụ onye na-elekọta ya na-eleba anya iji ọmịiko ahụ
15 nke Iwu Mmemme Ahụ Ike Ọgwụ Cannabis;
16 (C) n’ebe ndozi ọ bụla;
17 (D) n'ime ụgbọ ala anaghị emeghe ọha na eze ọ gwụla ma
18 cannabis dị na arịa echekwara echekwara, nwere nnukwu akara
19 enwere ike ịnweghị ike ịbanye ebe ụgbọala nọ
20 na-akpụ akpụ; ma obu
21 (E) n’ụlọ obibi nke na-eji oge ọ bụla
22 iji nye ụmụaka nwere ikikere ma ọ bụ ndị ọzọ nwere mmekọrịta ọzọ
23 nlekọta ọrụ na ogige ahụ;
24 (3) iji afọ:
25 (A) n'ime ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ, belụsọ ma enyere ya aka
26 tozuru onye ọrịa ma ọ bụ onye na-elekọta ya anya
1 Obere ọmumu nke Mmemme Pizza Cannabis
3 (B) na ntọala nke ụlọ akwụkwọ ọta akara ọ bụla ma ọ bụ isi ma ọ bụ
4 ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ gwụla ma akwadoro maka asambodo
5 ma ọ bụ onye na-elekọta ya na-eleba anya iji ọmịiko ahụ
6 nke Iwu Mmemme Ahụ Ike Ọgwụ Cannabis;
7 (C) n’ebe ndozi ọ bụla;
8 (D) n'ụgbọala ọ bụla;
9 (E) n’ụlọ obibi nke na-eji oge ọ bụla
10 iji nye ụmụaka nwere ikikere ma ọ bụ ndị ọzọ nwere mmekọrịta ọzọ
11 nlekọta ọrụ na ogige ahụ;
12 (F) n’ebe ọhaneze; ma obu
13 (G) n'amaghị ama nso na nso nso
14 onye ọ bụla n’agbata afọ iri abụọ na abụọ na-edebeghị aha ya
15 onye na-ahụ maka ọrịa cannabis n'okpuru iji Ọmịiko
16 nke Iwu Mmemme Ahụ Ike Ọgwụ Cannabis;
17 (4) igbo anwuru ahihia n’ebe obula anwuru anwuru
18 amachibidoro n'okpuru Smoke Free Illinois Act;
19 (5) ịrụ ọrụ, ịnyagharị, ma ọ bụ ịnọ nkịtị
20 njikwa nke ụgbọ ala, ụgbọ elu, ma ọ bụ ụgbọ mmiri mgbe
21 iji ma ọ bụ n'okpuru mmetụta nke osisi cannabis mebiri
22 Nkebi nke 11-501 ma ọ bụ 11-502.1 nke Usoro Vegbọala Illinois;
23 (6) facilme ihe iji cannabis site n'aka onye ọ bụla
24 akwadoghị iji cannabis n'okpuru Iwu a ma ọ bụ
25 Obere ọmiko nke Iwu Mmemme Ahụike Cannabis;
26 (7) ịnyefe cannabis na onye ọ bụla megidere
1 Iwu a ma ọ bụ nke ọmịiko nke Pilatary Cannabis Medical
2 Iwu Mmemme;
3 (8) otu onye ọka iwu na-edetu cannabis,
4 Onye na-eme mgbazi, onye na - ahụ maka nnwale, ma ọ bụ onye na - agba ọkụ
5 mgbe ị nọ ọrụ; ma obu
6 (9) ị ofụ cannabis nke onye nwere ụlọ akwụkwọ
7 akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mgbe ị na-arụ ọrụ.
8 Dika ejiri ya na ngalaba a, “ebe ọha” putara ebe obula
9 ebe enwere ike ịtụ anya ka mmadụ hụ ya
10 ndị ọzọ. “Ebe ọha” na-agụnye akụkụ niile nke ụlọ nweburu
11 Oke ma ọ bụ akụkụ, ma ọ bụ gbazitere, site na Ọchịchị ma ọ bụ otu mpaghara
12 gọọmentị. “Ọnọdụ ọha” anaghị agụnye ụlọ obibi
13 ọ gwụla ma ejiri ụlọ obibi nkeonwe iji nye nwata nwere ikikere
14 nlekọta, nlekọta nlekọta, ma ọ bụ nlekọta ọrụ mmekọrịta ndị ọzọ yiri ibe ha na
16 (b) Onweghi ihe di n’iwu a nke a ghaghi ime ka egbochie
17 jide ma ọ bụ gbaa mmadụ ikpe maka ịnya ụgbọ ala na-enweghị isi
18 ịkwọ ụgbọ ala n'okpuru ike nke mkpụrụ osisi cannabis ma ọ bụrụ na enwere ike kpatara ya
20 (c) Onweghị ihe dị na Iwu a ga-egbochi azụmahịa nkeonwe
21 igbochi ma ọ bụ machibido iji cannabis na ya
22 ihe onwunwe, tinyere mpaghara ebe a na-adọba ụgbọala.
23 (d) Onweghị ihe dị na Iwu a ga-achọ mmadụ ma ọ bụ
24 businesslọ ọrụ azụmaahịa mebiri usoro iwu gọọmentị,
25 tinyere kọleji ma ọ bụ mahadum ndị ga-emerịrị site na
26 Schoolslọ akwụkwọ na-enweghị ọgwụ ọjọọ na mmezi Iwu nke obodo 1989, nke ahụ
1 choro ka ogige ulo oru ghara inwe ogwu.
2 Nkebi nke 10-40. Weghachi, Mmegharị, na Mmeghari ohuru.
3 (a) Onye Isi Ochichi na-ahụta iji wee lebara ndị
4 ndịiche akọwapụtara n'okpuru, ụzọ obi ọjọọ na
5 akụrụngwa ezubere iche iji kwado atụmatụ na njikwa nke obodo
6 azịza obodo dabere na nsonaazụ ndị a. Nye
7 mezuo ebumnuche a, Mweghachi, Mweghachi, na Mwepụta (R3)
8 Emere mmemme maka ebumnuche ndị a:
9 (1) ilebara mmetụta akụ na ụba anya ozugbo
10 ọgbaghara, ime ihe ike, na akụkọ ihe mere eme nke
11 ikpe mpụ na-azaghachi ndị obodo na n’otu n’otu
12 chọrọ site n'inye ihe iji kwado atụmatụ ime obodo na
13 njikwa mmeghachi omume obodo na-emetụta mmetụta ndị a;
14 (2) iji belata ma ngụkọta ego nke
15 ime ihe ike egbe na oke ịda ogbenye na steeti a;
16 (3) ichebe obodo site na ime ihe ike nke egbe
17 itinye ego na ntinye anya na mmemme ntinye aka, gụnyere
18 onodu aku na uba na ikwalite mgbochi mgbochi ime ihe ike na ulo,
19 ngwangwa ọgwụgwọ trauma na ogbe, onye meruru egbe
20 ọrụ, yana mmegide mgbochi ahụike ọha;
21 (4) iji kwalite akụrụngwa ọrụ na ike
22 ụlọ metụtara ndị mmadụ na-ekpebi ahụike nke
23 ebe tozuru oke ime obodo.
24 (b) N'ime nkebi a, "ikike" pụtara Illinois
25 Ndị na - ahụ maka ozi ndị omekome na - arụ ọrụ na
1 ikpe ziri ezi, ịha nhatanha, na ohere nke
3 (c) Izi oke nke mpaghara R3. N'ime 180 ụbọchị mgbe
4 datebọchị dị mma nke Iwu a, Ndị nwe obodo ga-achọpụta dịka
5 tozuru oke, mpaghara dị na steeti a site na ụzọ ndị usoro-mmata amaara
6 ókèala, iji weghachi weghachi,
7 Reinvest, na Mmemme Mmeghari ohuru dika R3 Gburugburu ya
8 tozuru itinye maka ego R3. Otu dị n'ime R3 Areas
9 tozuru oke itinye maka ego Steeti site na
10 Weghachi, Reinvest, na mmeghari ohuru mmemme. Asambodo maka
11 Nchoputa dika Mpaghara R3 bu ndi a:
12 (1) Dabere na nyocha nke data, obodo dị na nke a
13 Kọwaa ihe dị nnukwu mkpa, nke edoghị anya, na-ezighi ezi
14 emetụtara site na mmefu akụ na ụba nke akụkọ ihe mere eme, na ndakpọ
15 site na ime ihe ike dika ego nke egbe
16 mmerụ ahụ, enweghị ọrụ, ọnụego ịda ogbenye ụmụaka, na nkwa
17 ga-esi ma ọ bụ lọta na Ngalaba Ndozi nke Illinois.
18 (2) Ndị ikike ga-ezigara ndị na-enyocha mmebe iwu
19 Gosiputa ya ma mee ka oha ya nile gosiputara na
20 njirimara nke ebe R3 tozuru etozu ga-enyochaghachi
21 o tozuru oke data n’ime afọ anọ ọ bụla. Site kwa afọ,
22 Ndị nwe obodo ga-enyocha data ma gosipụta ma ọ bụrụ na ekpuchi data
23 Mpaghara R3 ọ bụla ma ọ bụ mpaghara mpaghara nwere ya, maka otu anọ
24 afọ, n'ụzọ kewapụrụ onwe ya site na nkezi nke
25 data steeti niile nke emeputara ihe izizi nke izizi
26 iji chọpụta mpaghara, gụnyere ọgbụgba ọkụ, ime ihe ike,
1 mmerụ ahụ egbe, enweghị ọrụ, ọnụego ịda ogbenye ụmụaka, ma ọ bụ
2 na-ekwe nkwa ma ọ bụ laghachi na Ngalaba Illinois nke
4 (d) Mweghachi, Mweghachi, na Mgbakọ Mmemme ga-
5 gbaa mmekorita aka na mmekorita n’ime R3 Mpaghara obula rue
6 belata otutu mmekorita n'otu uzo.
7 (e) Mweghachi, Mbeghachi, na Mgbakọ Mmemme
8 kere ma gosipụta ụdị di iche-iche nke Steti
9 Illinois, gụnyere mpaghara, agbụrụ na agbụrụ dị iche iche.
10 Iji data nke ikike si n’aka, weghachi,
11 Reinvest, na Mmeghari Mmemme Board ga-ahụ maka ya
12 n'ichepụta ókèala R3 na maka nhọpụta na
13 Nlekọta nke ndị enyemaka R3 Mpaghara. Weghachi, nlaghachi, na mmelite
14 Mmemme Board out outicio òtù ga-, n'ime ọnwa anọ ka emechara
15 ụbọchị dị mma nke Iwu a, zukọta Kọmitii ịhọpụta a
16 Weghachi, Mbipụta, na Mmepụta Mmemme Boardlọ Ego
17 nye ntuzi aka na imezi nhazi
18 maka Mmemme R3.
19 (1) Ndị otu out officio bụ:
20 (A) Onye isi ochichi obodo, ma obu nke ya
21 onye akaebe, onye ga-eje ozi dị ka oche.
22 (B) Onye ọka ikpe, ma ọ bụ nke ya
24 (C) Onye isi azụmahịa na akụ na ụba
25 Ohere, ma obu onye aka ya.
26 (D) Onye Nduzi Ahụike Ọha, ma ọ bụ
1 onye nnọchi anya ya.
2 (E) Onye isi nzizi, ma obu nke ya
4 (F) Onye Isi Nduzi nke Illinois
5 Lọ Ọrụ Ọchịchị Na-ahụ Maka Ikpe Ikpe Mpụ, ma ọ bụ ya
6 onye nnọchi anya ya.
7 (G) Onye Nduzi Na-ahụ Maka Ọrụ na Ọrụ, ma ọ bụ
8 onye aka ya.
9 (H) Odeakwụkwọ nke ọrụ ndị mmadụ, ma ọ bụ ya
10 onye nnọchi anya ya.
11 (I) Onye otu onye ome iwu, nke ndị
12 Onye isi ala.
13 (J) Onye otu onye omebe iwu,
14 họpụtara Onye isi oche nke oflọ nke
15 Ndị nnọchi anya.
16 (K) Onye otu Senate, nke onye
17 Onye Ndu nke Ochichi nke Nta.
18 (L) Onye otu onye omebe iwu,
19 nke Ndu Onye-isi nke thelọ nke
20 Ndị nnọchi anya.
21 (2) N'ime ụbọchị 90 ka Rzọ R3 gachara
22 họpụtara Site Mweghachi, Mweghachi, na Mwepụta Ọhụụ
23 Board, ndị otu a ka a ga-ahọpụta ka
24 Board site na oche oche R3:
25 (A) ndi isi oha nke obodo
26 ikike na steeti nke gụnyere mpaghara R3, ma ọ bụ
1 ndị nke ha;
2 (B) Ndi n’oru ime obodo n’obodo ma obu ndi ime obodo
3 ndị nnọchi anya nzukọ mmepe na-enye
4 ọrụ iji gwọọ ihe ike ma lebara ọha mmadụ anya
5 ndị na-ekpebi ahụike, ma ọ bụ ịkwalite obodo
6 ntinye ego, tinyere, mana ọnweghị oke na ọrụ
7 dị ka itinye ọrụ na ọzụzụ, agụmakwụkwọ
8 ọrụ, mmemme mmepe ọrụ, na
9 aku na uba. Ndị otu na-ahụ maka obodo
10 ndị nnọchi anya ga arụ ọrụ na ikike ikike
11 nke ahụ gụnyere Mpaghara R3 ma ọ bụ karịa karịa 2
12 ndị nnọchi anya ga-arụ ọrụ na Cook County.
13 Opekata mpe otu n’ime ndi obodo enyere aka
14 nwee ahụmịhe n’inye ndị kwagara mba ọzọ ọrụ
15 onu ogugu;
16 (C) Ọkachamara abụọ na ngalaba nke mbelata ime ihe ike;
17 (D) Otu nwoke nwoke a kpọchiri mbụ
18 ma ọ gaferela afọ iri abụọ na anọ n’oge atọrọ;
19 (E) Otu nwanyi nke diri na mbu
20 mkporo na karịrị afọ 24 na oge nke
22 (F) Mmadu abuo ndi diriburu uzo
23 mkporo na nọ n'agbata afọ 17 na 24 na
24 oge oru.
25 Dika ejiri ya na paragraf a (2), “mmadu nwere
26 ịbụ onye a kpọburuburu “pụtara onye nọrọbu ya
1 ikpe nke ma ọ bụ gbaa iwu na otu ma ọ bụ karịa felonies, onye
2 ikpe ka ọ nọrọ n’ụlọ mkpọrọ, na onye nwere
3 mezuru ahịrịokwu ya. Ndị otu ga-eje ozi
4 enweghị akwụghachi ụgwọ ma enwere ike ịkwụghachi ya maka ezi uche
5 mmefu ewebata na arụmọrụ nke ọrụ ha site na
6 ego ruru eru maka nzube ahụ. Ozugbo ndị otu ya niile
7 ka akwadoro dika esiputara n’ime ihe (A) site na (F) nke
8 paragraf a (2), Board nwere ike jiri ike ọ bụla,
9 rụọ ọrụ ọ bụla, mee ihe ọ bụla, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na
10 na-eme ka ebumnuche ya na ebumnuche ya dịrị na mgbe atọrọ
11 ọnụ ọgụgụ ndị otu ya. Okwu ndị Board na-abụghị
12 Officio na Ndị Isi Mgbakọ General ga-akwụsị 4
13 afọ site na ụbọchị nhọpụta.
14 (f) N’ime ọnwa iri na abụọ ka usoro iwu a siri ike,
15 na Board ga:
16 (1) imepụta usoro maka ịrịọ ngwa si
17 tozuru etozu R3;
18 (2) zụpụta tempụl maka atụmatụ na
19 mmejuputa ihe omume nke R3 Areas nyefere
21 (3) ịchọpụta ihe zuru oke iji kwado ihe zuru oke
22 nlekọta na nyocha nke R3 Mmemme, gụnyere
23 na-ewu ma na-akwagide isi mmemme ikike na
24 obodo na Steeti;
25 (4) tulee ngwa enyemaka R3 Mpaghara na aro
26 nkwekọrịta ma kwado maka nkesa akụ;
1 (5) zụlite usoro eji arụ ọrụ maka
2 na-elekwasị anya na nsonaazụ ọma;
3 (6) zụlite usoro iji kwado usoro nlere anya na
4 ntule nke mmemme R3; na
5 (7) zipụta akụkọ kwa afọ na General Assembly
6 na ka ezigharịrị Gọvanọ na Office nke Gọvanọ
7 na websaịtị General wee nye ọha ọha
8 akụkọ kwa afọ banyere ọganihu ya.
9 (g) Enyemaka mpaghara R3.
10 (1) Ndị Illinois ga-enye ego onyinye
11 Informationlọ Ọrụ Ọmụma Ihe Ozi Ọchịchị na Mpụ, na nhazi
12 ya na bọọdụ R3, dabere na atụmatụ ahụ
13 ga-arụpụta nsonaazụ akọwapụtara na nkebi (a) na
14 kwekọrọ ihe Grant chọrọ
15 A ga-aza ajụjụ na nkwupụta nghọta. Ihe omume R3 gha
16 na-emekwa ka e nwee ọzụzụ na ọrụ aka
17 enyemaka maka iwulite ikike dị n'etiti na mpaghara R3.
18 (2) A ga - eji ego Enyemaka R3 nyere aka ilebara ya anya
19 mmepe akụ na ụba, ọrụ mgbochi ime ihe ike,
20 ọrụ ntinye, mmepe ndị ntorobịa, na enyemaka ndị ọrụ obodo.
21 (3) Mweghachi, nwughachi, na mmeghari ohuru mmemme
22 ndị enyere onyinye R3 Mpaghara ga, n'ime oge ọ bụla karịrị
23 Daysbọchị 120 site na mmechara nke atụmatụ ịmechara
24 kọwara na Nkebi a, mezue nkwekọrịta na
25 mee atụmatụ maka mmejuputa iwu. Mmejuputara mmemme nwere ike:
26 (A) nwere ihe ndabere na akaebe ma ọ bụ omume kacha mma
1 nyocha ma ọ bụ nwee nyocha na-egosi
2 ikike iji gboo ebumnuche mmemme a
3 mpekere (a);
4 (B) nakọta data site na mmalite nke atụmatụ
5 eme site na mmejuputa atumatu, ya na data
6 enyemaka teknuzu nchịkọta mgbe achọrọ ya, gụnyere
7 ọnụ ahịa data na data metụtara akọwapụtara ihe bara uru
8 obere oge, etiti oge, na ogologo oge ihe mgbaru ọsọ na metrik;
9 (C) kọọrọ data Weghachi, Reinvest na Renew
10 Kọmitii Ahụ Mmemme biannually; na
11 (D) ozi mkpesa dika R3 choro
12 Kọmitii Mmemme.
13 Nkebi nke 10-50. Ọrụ; ụgwọ ọrụ.
14 (a) Onweghị ihe dị na Iwu a agaghị egbochi onye were ya n'ọrụ
15 na-anabata nnabata ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ ebe ọrụ ọgwụ n'efu
16 atumatu, ma obu atumatu oru banyere ule ogwu,
17 ise anwụrụ, ị consumptionụ mmanya, nchekwa ma ọ bụ iji akụrụngwa na
18 N'ebe ọrụ ma ọ bụ mgbe a na-akpọ oku ma ọ bụrụ na etinyere iwu ahụ
19 na-adịghị asọpụrụ mmadụ.
20 (b) Onweghị ihe dị na Iwu a ga-achọ ka onye were ya n'ọrụ nye ya ikike
21 onye ọrụ ga-anọ n'okpuru ike nke ma ọ bụ jiri mkpụrụ osisi can
22 Ebe onye were ya n’ọrụ ma ọ bụ mgbe ọ na-arụ ọrụ onye ọrụ
23 ọrụ ma ọ bụ mgbe a na-akpọ gị.
24 (c) Onweghị ihe dị na Iwu a agaghị egbochi ma ọ bụ gbochie onye were ya n'ọrụ
25 site n'ịdọ onye ọrụ ntaramahụhụ ma ọ bụ ịkwụsị ọrụ nke
1 onye ọrụ maka imebi iwu nke onye were ya n'ọrụ ma ọ bụ
2 iwu ọgwụ ọgwụ n’ebe ọrụ.
3 (d) Onye were ya n’ọrụ nwere ike ileba anya n’onye ọrụ gha eme ya
4 Nkpuru ike nke osisi cannabis ma ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ nwere ezigbo ya
5 nkwenye okwukwe na onye ọrụ na-egosipụta ihe doro anya, akọwapụtara
6 mgbaàmà mgbe ị na-arụ ọrụ na-ebelata ma ọ bụ belata nke onye ọrụ
7 ịrụ ọrụ nke ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke ọrụ onye ọrụ
8 ọnọdụ, tinyere akara nke okwu onye ọrụ,
9 ihe arụ, arụmọrụ, njikwa ọnụ, arụmọrụ,
10 omume ezighi ezi ma ọ bụ omume pụrụ iche, ma ọ bụ akpachapụghị anya ma ọ bụ akpachapụghị anya
11 n'ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụ igwe; ileda maka nchekwa anya
12 nke onye ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ, ma ọ bụ itinye aka na ihe ọghọm ọ bụla nke ahụ
13 na-ebute nnukwu mbibi nke akụrụngwa ma ọ bụ ihe onwunwe; ọgba aghara
14 nke nrụpụta ma ọ bụ usoro nrụpụta; ma ọ bụ akpachapụghị anya na
15 na-ebute mmerụ ahụ ọ bụla na onye ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na onye were ya n'ọrụ
16 ahọrọ ịdọ onye ọrụ aka na ntị na onye ọrụ ahụ
17 nọ n'okpuru ikike ma ọ bụ na-egbochi ya, onye ọrụ ya
18 ga-eme ka onye ọrụ ahụ nwee ohere ga-abara ya mba
19 ihe ndabere nke mkpebi ahụ.
20 (e) Onweghi ihe di na iwu a a ghaghi imeputa imeputa ma obu
21 pụtara ihe kpatara mmadụ ọ bụla megide onye were ya n'ọrụ maka:
22 (1) ihe omume, gụnyere ma ejedebeghị na idobe ihe
23 onye ọrụ ma ọ bụ onye na-achọ ọgwụ ọgwụ na mmanya
24 nnwale n'okpuru iwu ọgwụ ị na-arụrụ ọrụ,
25 tinyere ọjụjụ ndị ọrụ jụrụ ịnwale ma ọ bụ
26 rụkọta ọrụ na usoro nnwale ma ọ bụ adọ aka na ntị ma ọ bụ
1 nkwụsị ọrụ, dabere na mma onye were gị n'ọrụ
2 nkwenye okwukwe na onye ọrụ ji ma ọ bụ nwee ya
3 N'ebe onye were ya n'ọrụ ma ọ bụ mgbe ọ na-arụ ọrụ ya
4 ọrụ onye ọrụ ma ọ bụ mgbe a na-akpọ oku mebiri nke
5 atumatu oru nke onye oru;
6 (2) omume, gụnyere ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ nkwụsị
7 oru, dabere na ezi nkwenye nke onye were ya n'ọrụ
8 ọ nwere onye ọrụ aka n'ihi ya
9 cannabis, ma ọ bụ n’okpuru mmetụta nke cannabis, mgbe ọ nọ na
10 N'ebe onye were ya n'ọrụ ma ọ bụ mgbe ọ na-arụ ọrụ nke onye were ya n'ọrụ
11 ọrụ ma ọ bụ mgbe a na-eme ihe megidere nke onye were gị n'ọrụ
12 iwu ọgwụ ebe ọrụ; ma obu
13 (3) mmerụ ahụ, mfu, ma ọ bụ ibu nke ndị ọzọ ma ọ bụrụ na
14 onye were ya n'ọrụ amabeghị ma ọ bụ nwee ihe kpatara ya
15 onye ọrụ ya nwere nsogbu.
16 (f) Onweghi ihe di n’ime Usoro a a ga-ewulite ịkwalite ma obu
17 belata nchedo nke iwu ọ bụla ọzọ nyere, gụnyere mana
18 ọnweghị oke na ọmịiko nke ọgwụ Cannabis Pilot
19 Mmemme Mmemme ma ọ bụ Mmemme opioid ọzọ Pilot.
20 (g) Ọ dịghị ihe dị na Iwu a nke a ga-eme ka egbochi ọ bụrụ ihe ọ bụla
21 na mgbochi ọ bụla nke gọọmentị etiti, nke steeti, ma ọ bụ mpaghara ọ bụla
22 gụnyere, mana ọnweghị oke na, Ngalaba United States nke
23 Iwu ụgbọ njem 49 CFR 40.151 (e) ma ọ bụ emetụta ihe
24 Ike nke onye were ya n'ọrụ irubere iwu gọọmentị ma ọ bụ steeti ihe ma ọ bụ ihe kpatara ya
25 ka ọ ghara ida nkwekọrịta gọọmenti etiti ma ọ bụ nke steeti ma ọ bụ ego.
26 (h) Dịka ejiri ya na ngalaba a, “ebe ọrụ” pụtara
1 Ulo obibi nke onye were ya, tinyere ụlọ ọ bụla, ezigbo ụlọ,
2 na ebe a na-adọba ụgbọala n'okpuru nchịkwa nke onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ mpaghara ejiri
3 site n'aka onye ọrụ mgbe ọ na arụ ọrụ ọrụ ya
4 ọrụ, na ụgbọ ala, ma ọ bụ ịgbazinye agbazinye, ịgbazite ma ọ bụ nke nwere ya.
5 Enwere ike ịkọwa "ebe ọrụ" site na ederede onye were ya n'ọrụ
6 Iwu eji enyere ọrụ aka, ọ bụrụhaala na iwu ahụ ekwekọrịtara
7 Nkebi a.
8 (i) Maka ebumnuche nke Ngalaba a, a na-ahụrụ onye ọrụ ọrụ anya "on
9 Kpọọ "mgbe a na - ahazi onye ọrụ dị ka elekere 24 '
10 mara onye ọ na-arụrụ ọrụ ka ọ nọrọ na njikere ma ọ bụ otu aka
11 maka ịrụ ọrụ metụtara ya
12 inye ha ọrụ n’ụlọ ọrụ nke onye were gị ọrụ ma ọ bụ na nke ọzọ
13 ebe onye were ya n'ọrụ choro ebe a, ma o bu